Cytation cold wave lotion for normal hair
ဆံသားအားဖြည့်ဆေးများပါဝင်ပြီး အသုံးပြုရာမှာလည်း လွယ်ကူသော အအေးကောက်ဆေးဖြစ်ပါသည်။..
Defender Steaming 3D Hair Treatment
About The Product ဆံသားအားလုံးအတွက် သင့်လျော်ပြီး ၊ သာမာန်ထက်3ဆ တောက်ပြောင်စေသော အပူ ၊ အအေး ကြိုက်နှစ်သက်သလိုပေါင်းနိုင်သော 100% ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေမည့် ပေါင်းဆေး ဖြစ်ပါသည်။..
Detox Preventive Care Treatment & Conditioner 500ml
About The Product မကြာခဏ ဆေးဆိုး ၊ ကောက်လိုက် ၊ ဖြောင့်လိုက် ဆံသားများအတွက် အထူးဖော်စပ်ထားသော အဆိပ်ထုတ်ပေါင်းဆေး Detox Treatment ဖြစ်ပါတယ်။..
Detox Shampoo 400ML
About The Product Dcash Detox Oxygen Original Shampoo helps to prevent the hair from being dehydrated and damaged due to chemicals and contaminants from excessive dyeing or bleaching of hair. The sha..
Fabulous Agran Oil
About The Product The Salon Expert Platinum Silver conditioner is best used with light colored hair tones (silver, ash, blonde etc.) It restores protein in the hair to repair dry and damaged hair and..
Glamorize pomade 100 g
About The Product Long lasting Hair Colour for lighter and shiner effect 100% Shine and thoroughly natural coverage Softness with no damaged hair after application Dcash master permanent colour cream..
Glamorize Setting Spray 400 ml
About The Product Collagen ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့အတွက် ဆံသားကို တောင့်တင်းခြင်းမရှိပဲနှင့် ပုံသွင်းထားတဲ့ Style ကို (72) နာရီကြာအောင် ထိန်းထားပေးနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးပုံသွင်း Spray ဖြစ်ပါတယ်။..
ဆံထုံး၊ထုံးဖွဲ့ရာတွင် လှပသော ပုံစံကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ပေးနိုင်သော STYLING Powder ဖြစ်ပါသည်။ ဆံထုံးကို ပိုမိုလှပပြီး ထုံးဖွဲ့ရာတွင်လည်း လွယ်ကူမြန်ဆန် အောင်ြ့ပုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ၊ အခြား ဆံပင် Style ပု..
Intouch Keratin Hyaluron Recreator Spray Conditioner
About The Product Dryer မသုံးခင်ဖြန်းပေးရသော အပူခံဖြန်းဆေးဖြစ်ပါသည်။ Condtioner ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့ ဆံသားအား ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေပါသည်။..
Intouch Tsubaki Oil Hair Serum
About The Product Curly & Volume Hair Coat, long lasting fragrance for 18 hours. Formulated with Tsubaki flower extract. Helps to restore dry and damaged hair to be strong, weight, beautiful curl..
Intouch Vitamin E Perfecting Spray Conditioner
Moss Heat Protector Lotion Serum
About The Product Hair Serum "Moss Shine Argan Repair & Heat Serum Lotion", formulated with Argan oil. Revive When faced with an environment or weather that hurts the hair Or even newly painted h..